Sida loo xannibo farriimaha tooska ah ee loo yaqaan 'Instagram' Androidsis
Instagram hubaal waa shabakad bulsho oo aad u guuleysata dhamaan dadka isticmaala barnaamijka bilow ilaa iyo maanta. Hawlaha badan waxay ka dhigayaan aalad lagu raro sawirada iyo waxyaabaha nolosheena ka kooban, iyo waliba waxyaabo kale.
Haddii aad fariimo ka hesho dad aan lagaraneyn waxaad ubaahantahay inaad xanibto fariimaha qaarKu shaandhee adoo raacaya dhowr talaabo haddii aad rabto kaliya farriimaha taageerayaashaada inay yimaadaan. Xaaladdan oo kale, waxaa ugu wanaagsan in laga hortago dadka aan ku aqoon inay kuu soo diraan qoraal iyo xitaa xiriirinta spam.
Waxa ugu fiican ayaa ah inaad ka xanibto dadka qaarkood "dhibsashada leh", taas oo ka hortageysa farriimaha qaaska ah inay ku soo gaadhaan, sidoo kale dhammaan ogeysiisyadooda kuma soo gaari doonaan Guriga. Instagram wali waa inay horumarisaa qaybtaan, gaar ahaan haddii aan lagu darin xiriiro, waxay kuu soo diraan farriimo sida mid ka mid ah kuwa raacsan kuu kari karo.
Si loo joojiyo helitaanka ogeysiisyada farriinta tooska ah ee 'Instagram' waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Fur barnaamijka Instagram ee qalabkaaga Android
Hadda raadi xulashada Jihooyinka
Hadda raadi fariimahaas aad rabto inaad joojiso aragtidaada
Wadahadalka gudahiisa, riix si aad u muujiso xulashooyinka kala duwan oo guji xulashada "fariimaha ka aamus"
Haddii aadan rabin inaad aragto mid ka mid ah qoraaladooda waxaa fiican inaad ka hor tagto dadka qaarkoodSi tan loo sameeyo, samee talaabooyinka soo socda:
Fur barnaamijka Instagram markale
Tag astaanta qofka ama dadka aad rabto inaad xannibo
Ka hel menu-ka midigta sare
Kala xulashada dhexdeeda, guji "Block", ilbiriqsi kadib qofka waa la xirayaa oo ma awoodi doontid inaad wax ka aragtid, ama wax farriin ah oo aad ku hesho farriintaada tooska ah
Tan waxaan uga fogaan doonnaa inaan ku qasno InstagramKuwo badan ayaa adeegsada farriinta tooska ah si ay u qoraan farriimo gaar ah, qaar aan macno lahayn ama adigu aad u raacdo. Waxaad u baahan tahay inaad waqtigaaga qaadatid si aad u sameyso laba shay oo ugu dambeyntii kuu oggolaan doona inaad si fudud u nasato.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo xakameeyo farriimaha tooska ah ee 'Instagram'
Google Play Music ayaa si rasmi ah u dhintay